China Cervical Neck Traction Mudziyo B01 Dhizaini uye Fakiti | Hongzhu
Chinyorwa Flocking machira, yakakwira mhando PVC, yepamusoro simbi isina simbi, Yakakwirira mhando marex tube
Ruvara Iyo 5 mavara mifananidzo inoratidza kana yakagadzirirwa
Neck ion yakatambanudza: yakashandiswa kudzikamisa kurwadziwa kwechibereki, -emusoro-mutsipa mutsipa mudonhwe unopa yakanyanya kunaka cervical tsigiro kubatsira kusunungura musoro, kuomarara kana kuerera. Uye zvakare, inogona kugadzirisa iyo isiriyo nzvimbo yekugara uye kudzikisira kupera simba uye kusagadzikana kubasa. (saizi: 12 “kusvika 17 ″)
Iyo tatu-layer dhizaini inoshanduka paunenge uchinjisa, uye mbiri dzeVelcro dzinobvumira iwe kugadzirisa iko kudzvinyirira iwe kwaunoda pasina kukurovera kana kuderedza kufema kwako. Kumusoro kunogadzirwa neakarongedza mucheka, rakapfava uye rinofema.
Chiri nyore kutakura: kana uchifamba kana pane bhizinesi, iro cervical traction kifaa rinogona kushomeka nyore nyore ndokuiswa muhomwe yako kana sutukesi. Kunyangwe iwe uri kumba kana kubasa, zviri nyore kunakidzwa nekunyaradza kunounza.
Triple yemhepo inosvina: pneumatic chishandiso chinotora nzira nhatu dzekudzivirira kutsemuka kwemhepo: tube bhora, vent vhezheni, kupatsanurwa kwematatu ehubhu dhizaini. Ivo vanonyanya kuderedza mukana wekubhururuka nekuda kwekukwegura kwezvinhu.
Yepfuura: Dzokera Brace
Inotevera: Cervical Neck Traction Mudziyo B01-1 Super Soft